चीन स्टड झुम्का -१ कारखाना र निर्माता G&T
राम्रो झल्काउनको लागि एक जोडी राम्रो झुम्का तपाईंको छालाको टोन र अनुहारको आकारसँग मेल खानुपर्दछ। बिभिन्न झुम्का व्यक्तिहरूको स्वभाव सेट। त्यसो भए कसरी तपाईंलाई कानमा झुम्काउने छनौट गर्ने? तपाईंको अनुहार, हेयरस्टाइल, शरीरको आकार, छाला टोन, सिजन र अन्य पक्षहरूको लागि झुम्काको जोडीसँग आफूलाई कसरी मिलाउने भनेर हामी तपाईंलाई सिकाउँछौं। पहिलो अनुहारको आकार हो। झुम्का अनुहारको आकारसँग समन्वय गरिनु पर्छ। जियांग जियाओबियनका लागि यदि अनुहारको आकार ठूलो छ भने गोलो झुम्का प्रयोग गर्नु हुँदैन। तपाईं सी ...
राम्रो झल्काउनको लागि एक जोडी राम्रो झुम्का तपाईंको छालाको टोन र अनुहारको आकारसँग मेल खानुपर्दछ। बिभिन्न झुम्का व्यक्तिहरूको स्वभाव सेट। त्यसो भए कसरी तपाईंलाई कानमा झुम्काउने छनौट गर्ने? तपाईंको अनुहार, हेयरस्टाइल, शरीरको आकार, छाला टोन, सिजन र अन्य पक्षहरूको लागि झुम्काको जोडीसँग आफूलाई कसरी मिलाउने भनेर हामी तपाईंलाई सिकाउँछौं।
पहिलो अनुहारको आकार हो। झुम्का अनुहारको आकारसँग समन्वय गरिनु पर्छ। जियांग जियाओबियनका लागि यदि अनुहारको आकार ठूलो छ भने गोलो झुम्का प्रयोग गर्नु हुँदैन। तपाईं ठूला कानको झुम्का लगाउन सक्नुहुन्छ, कानको नजिक, वा अनुहारको फराकिलोपन कम गर्न त्रिकोण कानको झुम्का लगाउन सक्नुहुन्छ। सानो अनुहार भएकाले मध्यम आकारको झुम्का प्रयोग गर्नुपर्दछ, जसको लम्बाई दुई सेन्टीमिटरभन्दा बढी हुँदैन। गोलो अनुहार भएका व्यक्तिहरूले राउन्ड इयररिंग्स लगाउनु हुँदैन, किनकि त्यसले अनुहार पनि मोटो देखिन्छ। लामो र drooping वर्ग वा त्रिकोणीय झुम्का प्रयोग गर्नु पर्छ। वर्गाकार अनुहार भएका मानिसका लागि तपाईले अनुहार नरम बनाउन मेकअप प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, र त्यसपछि यसलाई लम्बाई-शैली मध्यम आकारको इयररिंगहरूसँग जोड्नुहोस्, जसले अनुहारलाई क्लासिक लाइनहरूको सुन्दरता देखाउनेछ। लामो अनुहार भएका व्यक्तिले अनुहारको झुम्का वा ठूलो झुम्का लगाउन सक्दछ अनुहारको छवि समायोजित गर्न र अनुहार मोटा र आकर्षक बनाउन।
दोस्रो, झुम्का र हेयरस्टाइल समन्वय हुनु पर्छ। लामो शल र लामो कपाल भएका महिलाहरू लामो र साँघुरो झुम्काको साथ सुन्दर र आँखा आकर्षित गर्ने देखिनेछन्; छोटो कपाल भएका महिलाहरू, जस्तै झुम्का र कपाल सल्लाहहरू, सौन्दर्य, छोटो कपाल र नाजुक झुम्का असर गर्दछ यसले महिलाको जीवन्तता र चतुरतालाई सेट गर्न सक्दछ; असमानमित कपालका स्टाइलहरू भएका महिलाहरू, जस्तै ठूलो झुम्का लगाएर, सन्तुलन गर्न सक्दछन् र अद्वितीय देखिन्छन्; जबकि झुला ईयररिंगको साथ क्लासिक बनले मानिसलाई मर्यादित र सुरुचिपूर्ण बनाउँदछ।
तेस्रो, झुम्का र शरीरको आकार बीच समन्वय। छोटो कदका महिलाहरु राम्रो, नाजुक र अति सुन्दर देखिन्छन् यदि तिनीहरूले सानो अन-कान डट झुम्का लगाए भने। यदि तपाईं पेंडन्टको साथ झुम्का लगाउनुहुन्छ भने, तपाईंको शरीर दृश्य मार्गनिर्देशनको तलतिर चालको कारण छोटो देखिनेछ। पातलो र अग्लो महिलाहरूको लागि, झुम्का वा ठूलो झुम्का लगाउनुले सुन्दरता बढाउन सक्छ।
चौथो, झुम्का र छालाको र of्गको समन्वय, झुम्काको छनोटले पनि अनुहारको छालाको रंगमा ध्यान दिनु पर्दछ। गाढा छाला भएका मानिसहरूले हल्का र colored्गको सामानहरू लगाउनु पर्छ। गाढा र colorsहरू पनि छनौट गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूले लुगासँग राम्रोसँग मेल खानुपर्दछ। हल्का छाला भएका मानिसहरूले गाढा पहिरन छान्नु पर्छ। केवल यस तरीकाले शेडहरू एक अर्कासँग तुलना गर्न सकिन्छ र राम्रो परिणामहरू उत्पादन गर्न सक्दछ। सेतो छाला रातो, फिक्का गुलाबी, जैतुन, आदिसँग मिलेको छ, र सुन सबै प्रकारका छाला टोनका लागि उपयुक्त छ।
अन्तमा, झुम्का मौसमसँग मिल्दोजुल्दो छ। सामान्यतया, प्रकाश बनावटको झुम्का गर्मीमा लगाइएका झुम्काका लागि चयन गर्न सकिन्छ, जुन कुनै आकारको हुन सक्दछ, जसले मानिसहरूलाई शान्त र सजिलो महसुस गराउन सक्छ। यदि तपाईं जाडोमा लगाइएको झुम्का प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, सादा चाँदी प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ, जुन स्थिर र उदार हो।
अघिल्लो: Ae-01 ब्लुटुथ स्टेरियो
अर्को: स्टड झुम्का -२
क्रिस्टल बल स्टड झुम्का